Bambulwe izinqe zasala obala oSmith noBoucher - Impempe
Bambulwe izinqe zasala obala oSmith noBoucher
December 15, 2021 Impempe.com
Ukuqashwa kukaGraeme Smith, ongumqondisi weCricket South Africa (CSA), nomqeqeshi wamaProteas uMark Boucher, yinto engahanjiswanga ngendlela neyayingafanele.
Lokhu kuhlaluke ngesikhathi iCSA ikhipha umbiko wayo kulandela ukulalelwa kweSocial Justice and Nation Building kulo nyaka, lapho bekuzanywa khona ukuxazulula izinkinga ezithinta ukucwasa ngokobuhlanga.
Lo mbiko kaDumisa Ntsebeza ungamakhasi angu-235 kodwa okugqamile kuwona ukuqashwa kukaSmith noBoucher.
UBoucher usebe ngumqeqeshi wamaProteas kusukela ngoDisemba 2019, ngemuva kokuthi uSmith enikwe isikhundla kwiCSA lapho ayebambe khona njengomqondisi okwesikhashana. Ugcine ethathe lesi sikhundla ngokusemthethweni ngo-Ephreli ka-2020.
Umbiko uthi isenzo sikaThabang Moroe, owayeyisikhulu esiphezulu, ‘sokuzingela’ uSmith ngo-2019, sasingahambisani nemigomo yeCSA yokuqasha, yize kwaba nenhlolokhono noCorrie van Zyl, Hussein Manack noDave Nosworthy.
Mayelana nokuqashwa kukaBoucher, uNtsebeza uthe “uSmith awukho nowodwa umgomo weCSA awulandela” njengoba ingazange ibe khona ihlolokhono. Okunye ukuthi uBoucher akanawo uLevel 4 wokuqeqesha odingekayo kulesi sikhundla akusona.
Umbiko uthi asikho isizathu sokuthi kungani uBoucher aqashwa njengomqeqeshi, kwashiywa u-Enock Nkwe owayesesebenze njengomqondisi weqembu obambile kuze kube yileso sikhathi.
UNkwe, owagcina eyiphini ngaphansi kukaBoucher, unawo uLevel 4 wokuqeqesha, kanti umbiko uveze ukuthi wacwaswa ngesikhathi kuqashwa.
Okunye okuvelile ukuthi into yobuhlanga ayizange ibe nesandla ngesikhathi kunophenyo lweCSA lokuthengiswa kwemidlalo lapho uThami Tsolekile, Gulam Bodi noLonwano Tsotsobe babethinteka khona, bagcina bemisiwe.
Kwenzeka konke lokhu nje amaProteas alindele ukuvakashelwe yi-India lapho bezodlala khona imidlalo yamaTest. Umdlalo wokuqala ungoDisemba 26.
Previous Previous post: Ushoda ngeyokuya obizelwe ukuyohlowa ikhono phesheya
Next Next post: UMashiane uthembisa ukubuyisa izinduku kwiRoyal AM